ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၈) - Myanmar Network
ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၈)
Posted by Language Republic on December 1, 2015 at 10:55 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဗြိတိသျှဗန်းစကားထဲက နှစ်သက်စရာကောင်းသော ဝေါဟာရတစ်လုံးဖြစ်ပါသည်။ Scrummy သည် အံ့သြလောက်အောင် ခံစားမှုလွန်ကဲသော အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တကယ့်ကို သရေကျလောက်အောင် အရသာ ထူးကဲသော အစားအစာကို ရည်ညွှန်းရာ၌ အသုံးပြုပါသည်။
ဥပမာ - Mrs Walker’s pie was absolutely scrummy. I had three pieces. (Mrs. Walker ရဲ့ မုန့်က အရမ်းကို အရသာရှိတာပဲ။ ကျွန်မ (၃)စိတ်တောင် တောင်စားလိုက် တယ်။)
ဗြိတိသျှဗန်းစကားတွေထဲမှ နောက်ထပ် ကြည်နူးစရာကောင်းပြီး အနည်းငယ်ရှေးဆန်တဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် မတူညီသော အမြင်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ရန်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အငြင်းပွားခြင်းတို့ကို ဖော်ညွှန်းရာ၌ အသုံးပြုပါသည်။
ဥပမာ - I hadaright kerfuffle with my girlfriend this morning over politics. (နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မနက်က ကျွန်တော့်ရည်းစားနဲ့ ရန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေ။)
အသုံးဝင်သော ဗြိတိသျှအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ "တွေ့ကရာ ရှစ်သောင်း" (သို့) ပေါက်တက်ကရ"ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။
ဥပမာ - That’saload of tosh about what happened last night’, or ‘Don’t talk tosh.’ (ညကဖြစ်ခဲ့တာတွေက မဟုတ်တရုတ်တွေပါ။ (သို့) "ပေါက်တတ်ကရတွေမပြောနဲ့။)
Permalink Reply by thinkhaingsoe on December 2, 2015 at 13:55